Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Yangon Airways: fananan'ny mpivarotra zava-mahadomelina ary manitatra noho ny teknolojia frantsay vaovao?
Ny Yangon Airways dia naorina tamin'ny Oktobra 1996 ho toy ny kaompaniam-pitaterana an-trano amin'ny fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny Myanmarma Airways, mpitatitra saina an'ny fanjakana any Myanmar, ary ny Orinasa Krong-Sombat any Thailand. Ny tobin'ny seranam-piaramanidina dia miorina amin'ny foibeny sy ny tobim-pikojakojana any Yangon. Tamin'ny volana oktobra 1997, ny tompona kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ankehitriny dia nahazo ny anjaran'ny orinasa Thai ary avy eo dia nahazo ny anjaran'ny Myanmarma Airways tamin'ny taona 2005. Avy eo, lasa kaompaniam-pitaterana manokana ao Myanmar ny zotram-piaramanidina. Avy eo dia niova ho zotram-pitaterana an-trano lehibe indrindra ny seranam-piaramanidina, ny fandaharam-potoanan'ny serivisy ary ny serivisy momba ny sidina miainga avy any Yangon ka hatrany amin'ny toeran-jotra ara-barotra sy fizahan-tany 13 lehibe any Myanmar. Nandritra izay telo taona lasa izay, Yangon Airways dia nahazo tombony tsikelikely; manana 37% eo ho eo izy tamin'ny 2007 ary nitombo ho 41% tamin'ny 2008.
Kaompaniam-pitaterana an'habakabaka iray hafa manana ny anarany mitovy Yangon-Airways no milaza ao amin'ny tranonkalany www.yangonair.com fa www.yangon-airways.com, dia tsy mifandray amin'i Yangon Airways Ltd. Nilaza ny zotram-piaramanidina fa an'ny ECCR Travel izay zotram-piaramanidina izay efa tsy Agent General Sales General an'ny Yangon. “Tsy afaka mandray andraikitra amin'ny tapakila na famandrihana avy amin'ity tranonkala ity izahay.
Misavoritaka izy rehefa tsy mazava hoe iza amin'ireo zotram-piaramanidina roa manana anarana mitovy no notanisain'ny Departemantan'ny Tahirimbolam-bolan'ny Foreign Assets Control (OFAC) ao amin'ny lisitr'ireo Nasionaly voatondro manokana sy olona voasakana (SDN). Araka ny lalàna federaly amerikanina, voarara ny Amerikanina tsy hanao raharaha amin'ny olona na fikambanana voatanisa ho SDN. Yangon Airways dia notendren'ny OFAC tamin'ny taona 2008 taorian'ny nahazoan'ireo mpanao trafika zava-mahadomelina malaza ao amin'ny Tafika Tafika Tafika Wa.
Yangon Airways dia nifindra tany amin'ny Zenith® PSS (Passenger Service System), nomen'ny TTI (Travel Technology Interactive).
Andriamatoa Aung Min Khaing, Tale mpitantana ny Yangon Airways dia nilaza fa: 'Ny fifindra-monina nankany amin'ny Zenith® PSS dia fahombiazana lehibe, niaraka tamin'ny ekipa TTI niara-niasa tamim-pilaminana niaraka tamin'ny ekipan'ny Yangon Airways, nandeha tsara tokoa izy io ary namela anay hanana lehibe kokoa fanaraha-maso ny saran-dàlana sy ny fitantanam-bokinay. Efa mahita tombony sy fahombiazana amin'ny fizotran'ny asa aman-draharaha avy amin'ny mora ampiasaina sy manan-karena amin'ny Zenith® izahay. '
Notohizan'Andriamatoa Aung Min Khaing, 'Ny fifindrana mankany amin'ny Zenith® PSS no dingana voalohany ao anatin'ny fandaharan'asa fanitarana orinasanay, izay hampisondrotanay ny fahazoana mivarotra, hifandray amin'ireo Agents momba ny dia an-tserasera amin'ny alàlan'ny Zenith® API ary, izahay koa dia mandinika Codeshare sy Interline, izay avelan'i Zenith® ho antsika. Ny fahatongavan'i TTI maharitra sy nahomby tany Myanmar dia nitondra tombony lehibe ho an'ny Yangon Airways. '
Andriamatoa Gregoire Echalier, tale jeneralin'ny TTI dia nilaza fa: 'Fifaliana lehibe ny niara-niasa tamin'ny ekipa Yangon Airways tamin'ity fifindra-monina manan-danja ity, fakan-tahaka ny fahazotoan'izy ireo sy ny maha-matihanina azy ireo.'
Araka ny voalazan'i Paul Martin, ny mpitondra tenin'ny fifandraisana amin'ny daholobe an'ny TTI dia tsy mandray carte de crédit izay mety hateraky ny fanaovana ankivy amerikanina ny mpitondra tenin'ny fifandraisana amin'ny TTI.
Hoy ihany i Echalier: 'Faly izahay fa anisan'ny fitomboan'ny Yangon Airways, ahafahan'izy ireo manitatra ny fivarotana ary koa ny fahaiza-miasa sy fiaraha-miasa amin'ny Airlines hafa. TTI dia nanana mpanjifa fiaramanidina marobe ho an'ny Zenith® any Myanmar, nandritra ny taona maro lasa izay, nanampy ny Yangon Airways ho an'ny mpanjifan'ny Zenith mpanjifa dia tena mampiseho ny fahaizantsika mitantana ny orinasa PSS / IT ho an'ny Airlines any Azia atsimo atsinanana.
Travel Technology Interactive Group dia orinasa iraisam-pirenena monina any Frantsa. Izy io dia mpamatsy vahaolana ho an'ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka, manampahaizana manokana amin'ny lozisialy IT ho fitantanana ireo zotram-pitaterana an'habakabaka
Akanjo tsara tsy manan-kialofana any Waikiki izao mangataka vola amin'ny mpizahatany